Ntị maka mgbasa ozi ahịa na-agbasawanye, ọ bụghị na-adalata! | Martech Zone
Mgbe m na-ejikwa ngalaba na-ere ahịa, ana m agwa ndị ahịa na oge ha ga-ejide iji nweta atụmanya metụtara kpọmkwem oge o were iji si igbe igbe ozi gaa na mkpofu ahịhịa. M ka kwere na nke ahụ bụ eziokwu. Amaghị m na m kwenyere na nlebara anya nke ndị na-azụ ahịa agbadaala kemgbe ọtụtụ afọ, ebe ọ bụ na ndị na-ere ahịa dara ada na-ebelata.
Ekwenyere m na uto nke ndị na-ajụ ase emewo ka ndị ahịa ghọọ ndị na-elebara anya karị, ọ bụghị obere. Ebe anyị na-ahụ nke a bụ ewu ewu nke mmemme dị ka Ndepụta Angie, Nkọwa, Ịde blọgụ, Amazon Nyocha, Oha obodo dị iche iche, wdg. Ndị mmadụ na-agbasi mbọ ike n'ịtụle ngwaahịa na ọrụ ha hụrụ n'anya ma kpọọ asị. Dị nlebara anya dị otú ahụ dị mkpa karịa ilele ebe 60 nke abụọ na Superbowl. Enwere azụmaahịa na-eme nke ọma gbadoro nzaghachi ndị ahịa.
Mkpesa ndị a mkpesa maka ndị na-azụ ahịa nwekwara nnukwu okporo ụzọ. Otu ihe atụ dị ịrịba ama nke nlebara anya bụ ntinye blog ebe onye edemede dere ma tinye mgbalị ya ịkagbu akaụntụ AOL ya. A nata ya ọtụtụ narị puku. Cheedị ụdị ego AOL ga-akwụ maka ụdị ahụ mma ntị! Ego ole ka akwadoro furu efu na otu ndekọ a?
Na ihe atụ ọzọ, David Berlind na-edekọ ndekọ ya na oku 13 nkeji T-Mobile, onye ọ kwụrụ ụgwọ (n'èzí akaụntụ nkịtị ya) maka ikuku ikuku na ọdụ ụgbọ elu ma enweghị ike ijikọ. T-Mobile jụrụ ịkwụghachi ụgwọ ya.
Dabere na Pew Report ọhụrụ, pasent 8 nke ndị na-ahụ maka ịntanetị, ma ọ bụ ihe dị ka nde ndị America iri na abụọ, debe blog. Pasent iri atọ na itoolu nke ndị na-ahụ maka ịntanetị, ma ọ bụ ihe dị ka 12 nde ndị okenye America, gụrụ blọọgụ - mmụba dị ịrịba ama kemgbe ọdịda 57.
Isi okwu a bụ na ndị na-azụ ahịa elebara anya gbasaa, ọ bụghị nkwekọrịta. Agbanyeghị, uche ha na-agbakụta onye na-ajụ ase, mgbasa ozi na-adịghị ọcha, na PR ma na-eche ihu na obodo na okwu ọnụ.
Dịka onye na-azụ ahịa, ọ bụ ọrụ gị ịmụ otu esi etinye ndị na-azụ ahịa site na teknụzụ ọhụụ na ndị ọhụụ. Ọ bụrụ na ị gbalịa ịlụso ha ọgụ, ị gaghị emeri. Ndị na-azụ ahịa na-elebara anya karịa karịa ka ha na-akwụbu, yana ụzọ dị mma karịa ka ha nwetagoro.
Jul 26, 2006 na 11:21 PM
A bụ ihe atụ ọzọ magburu onwe ya, nke a sitere na TicketMaster:
Jul 27, 2006 na 3:16 PM
Na onye ọzọ si oflọ akụ America!